Viiktar Moosis -taphataa sarara ittisaa harka mirgaa Cheelsii - BBC News Afaan Oromoo
Viiktar Moosis -taphataa sarara ittisaa harka mirgaa Cheelsii
Ergisaan kilabootarra naanna'aa kan ture Moosis dandeettii agarsiiseen amma Cheelsii keessatti warreen barbaadaman keessaa ta'eera
Viiktar Moosis yoo waa'ee hojiisaa duubatti ilaalu, barri 2016/2017 bara dubbiin itti jijjiirameef akka ta'e hubachuunsaa waan mirkanaat.
Ergifataan kilabootarra naanna'aa waggoota gaarii hin taane dabrsaa kan ture Moosis namni ganna 26, dhumarratti hojii isaa Istaanfoord Biriijitti bu'uura cimaarra kaa'uun garee Piriimeer Liigii injifate keessatti miseensa baay'ee barbaachisu ta'e.
Fulbaana bara darbetti Cheelsiin erga Arsenal fi Liivarpuuliin walitti aansee moo'ameen booda tapha Haal Siitii waliin taasisan irratti tooftaa 3-4-3 fayyadamuun leenjisaan Cheelsii Antooniyoo Koontee Moosis iddoo taphatee hin beekne ittisa harka mirgaa irratti hiriirsee guyyaa Moosis addatti yaadachuu malu dha.
Waggoota 3 booda Cheelsiif tapha jalqabaa guyyaa taasise kanarratti, taphataan kun dandeettii gara fuulduraatti kubbaa fuudhee deemuu qabuu fi gara boodaattis deebi'ee taphachuu qabuun sochii ajaa'ibsiisaa ta'een kilabicha gargaaree, taphataa cimaa guyyaa Sanaa ta'uun guyyaa filatame dha.
Injifannoon Haal Siitii irratti gonfatan Cheelsiif jalqabbii taphoota 13 walitti aansuun moo'anii riikoordii itti qabatanii yoo ta'u, Moosisiif ammo taphoota 22 walitti aanan irratti dhaabbiin akka hirmaatu kan taasiseenidha.
Ergifatarraa gara 'lafa kakuu' ga'uu
Taphataa ergisaan joorurraa gara barbaadamummaatti of ceesise
Ji'a itti aanuttis taphataan duraan tirataa ture warra cuquliisaaf barbaachisaa ta'ee kilabii bara 2012'tti gale waliin waliigaltee haaraa mallatteesse.
Kunaafis kan galateeffamu dandeettii kanneen biroo arguu hin dandeenye yeroo qophii irratti kan arge fi shoora adda ta'e kan kenneef Antooniyoo Kontee yoo ta'u, Moosis carraa argatetti fayyadamee humna, saffisa fi cimina guutuudhaan baricha xumure.
''waliigalteen haaraa kun milkiif cimee hojjachuu fi kutannoo Viiktariif ragaa dha,'' jechuun ture daayireektarri teekniikaa Cheelsii Maayikil Emenaaloo kan dubbatan.
Geessituu: Kilaba Cheelsii
Dhumarrattis Piriimeer Liigii injifate, achiis dirgommii 'FA Cup' Arsenaaliin moo'amanii waancaa dhabanus, meedaaliyaa meetii argateera. Tapha kanarratti garuu kaardii diimaa dhaan ba'uun dorgommicha xumure.
Tajaajila garee biyyaalessaa
Moosis bara kana taphoota iintarnaashinaalaa 3 qofarratti hirmaatus, tapha Kaameeruuniin 4-0 injifachuun waancaa adduunyaan ala taasisaniin irratti galchii lakkoofsisuun, biyyisaa waancaa adduunyaaf yeroo 3'f walitti aansuun akka dabartu taasisee jira.
Warra Risaa lafa kakuutti kan qaqqabsiise Moosis, Badhaasa BBC baranaa injifachuun Jeey-Jeey Okoochaatti aansuun taphataa Naayijeeriyaa 2ffaa ta'uu malaa laata?
Filachuuf ammoo geessituu kan fayyadamaa - Geessituu